Ka hor intaanad iman Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / Ka hor intaanad iman Iswiidhan
Adigu waa inaad joogtaa gudaha Iswiidhan ama xuduudka Iswiidhan si aad u codsato magan-gelyo. Maaha suurtagal in magan-gelyo la codsado ka hor intaanad iman Iswiidhan ama laga sameeyo safaarad iswiidhish ah.
Waa Hey'adda Socdaalka ee gudaha Iswiidhan ta baaraysa haddii aad xaq u leedahay magan-gelyada Iswiidhan. Bogga intarnatka ee Hey'adda Socdaalka waxaa ku jira macluumaad badan oo ku saabsan in magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan.
Adigu waxaa kale oo aad akhrisan kartaa warbixinta ku taala boggan si aad isu sii diyaariso ka hor imaatinka Iswiidhan.
Haddii aad magan-gelyo ka codsatay dal kale ka hor intaanad iman Iswiidhan
Haddii aad ka soo carartay dal ka baxsan Yurub waa inaad magan-gelyo ka codsataa dalka ugu horeeya ee gudaha Yurub ee aad timi. Tani waxay ku qorantahay Heshiiska Dublin, kaas oo ah heshiis u dhaxeeya dalalka Midowga Yurub (EU), Noorway, Iislaand, Siwiserland iyo Layjastayn.
Haddii aad magan-gelyo ka codsato gudaha Iswiidhan waxaa Hey'adda Socdaalku bilaabaysaa inay baarto:
Haddii aad haysatay fiisaha dal kale oo ka mid ah EU.
Haddii aad qaar ka mid ah noocyada sharciga daganaansho ku leedahay dal kale oo ka mid ah EU.
Haddii aad magan-gelyo ka codsatay dal kale oo EU-da ah intaad ku soo socotay Iswiidhan.
Haddii mid ka mid ah qodobadani sax yihiin markaasi Iswiidhan mas'uul kama aha codsigaaga magan-gelyo. Markaasi waa inaad ku noqotaa dalki aad haysatay fiisihiisa ama sharcigiisa, ama aad ka codsatay magan-gelyo.
Haddii aad qaraabo ku leedahay gudaha Iswiidhan way dhici kartaa in codsigaaga magan-gelyo si kastaba ha ahaatee lagu eego gudaha Iswiidhan.
Dheeraad ku saabsan Heshiiska Dublin ka akhriso bogga Hey'adda Socdaalka.